Mpanamboatra sy mpamatsy PET - China PET Factory
Tavoahangy PET miloko PET 0,3 oz misy vozony 12-400
Ny tavoahanginay mitete 0,3oz / 8.8ml dia vita amin'ny fitaovana PET. Ny tavoahangy dia fisaka amin'ny endrika rano mitete. Ny tavoahangy dia manondro fa azo zahana na arahana amin'ny dity. Hita tao amin'ny `` https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=fifampikorohanay&oldid=18870745 '' plug mba hahazoana antoka fa ny vokatra dia famehezana 100%. Azo ampiasaina amin'ny fonosana eyedrops, fonosana menaka esory, tavoahangy sigara elektronika.
Tavoahangy PET PET 0,5 oz misy famaranana hatoka 12-400
Ny tavoahanginay mitete 0.5oz / 15ml dia vita amin'ny fitaovana PET. Ny tavoahangy dia manondro fa azo zahana na arahana amin'ny dity. Hita tao amin'ny `` https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=fifampikorohanay&oldid=18870745 '' plug mba hahazoana antoka fa ny vokatra dia famehezana 100%. Azo ampiasaina amin'ny fonosana eyedrops, fonosana menaka esory, tavoahangy sigara elektronika. Tavoahangy fitetezana wholesales.
Tavoahangy heksagonaly PET 2,7 oz volontsôkôlà vita amin'ny tendany 38-400
80ml PET volontsôkôlika plastika tavoahangy vitamina Pill Capsules tavoahangy. Fitaovana ara-pahasalamana sy sariaka tontolo iainana. Tsy misy poizina sy tsy misy tsirony, mora milalao an'ity tavoahangy kely azo entina ity. Serivisy OEM: fanontana pirinty vita amin'ny landy, marika taratasy, labozy plastika, famonosana. Tavoahangy plastika fotsy miendrika boribory banga. Mazava ny vatan'ny pilina pilina, tsara ny famirapiratany, ny fahombiazan'ny famehezana. Mety amin'ny kaontenera entana, kaontenera kosmetika, kaontenera sakafo, kaontenera ara-pitsaboana, kaontenera vatomamy, sns. , ao anaty tena madio, afaka manangona pilina vonjy taitra, takelaka ampiasaina matetika, ampiasaina mora. tavoahangy plastika amidy
2.7 Oz Oz tavoahangy boribory vita amin'ny volamena vita amin'ny volamena miaraka amina tendany 36-400
Vokatra PET PET volamena 2.7oz. Ny tavoahangy plastika misy satroka volamena dia mampiseho fa nahavita ny fitsaboana volamena, ny vokatra fonosana dia tsara kokoa sy tsara kokoa, afaka manao ny fonosana boaty fanomezana. Ny tavoahangy fitsaboana plastika dia azo atao mba hanasongadinana ny marika famantarana anao. Afaka manao fitoeram-kapsily, fitoeran-javatra vovoka sy ny sisa. Ny tavoahangy tavoahangy pilina dia nopetahana tombo-kase vita amin'ny alimina vita amin'ny alimina mba hahazoana antoka fa ny vokatra tsirairay dia afaka mahazo vokatra famehezana 100%. Azonao atao koa ny manamboatra loko hafa raha tianao. tavoahangy plastika pilina
6.7oz 200ml tavoahangy fisaka PET madio misy tendany 24-410
Tavoahangy plastika 6.7oz Mamokatra loko isan-karazany arakaraka ny filanao. Raha miloko ny ranonao dia ny tavoahangin'ny PET natoraly no tsara indrindra. Misy satroka plastika, satroka atsipy, spray ary paompy. Ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fiarovana ny mangarahara PET tavoahangy plastika sakafo misy flip cap dia azo ampiasaina ho tavoahangy mamintina. Pet-grade Sakafo PET dia tsy misy poizina, tsy misy tsirony, azo antoka, sariaka amin'ny tontolo iainana ary fananana famehezana tsara. Serivisy OEM: fanontana lamba vita amin'ny landy, marika vita amin'ny taratasy, labozia plastika, famonosana. Mora ampiasaina sy hadio. Mora ny mitondra ny vokatrao amin'ny hoditrao am-pandehanana, miaraka amina endriny mifangaro sy azo entina, azonao atao ny mametraka azy ireo na aiza na aiza, mamonjy toerana sy mora entina amin'ny dia rivotra.
Tavoahangy silinder 7 oz mazava miaraka amin'ny famaranana vozona 68-400
Tavoahangy fanosotra 7oz ho an'ny taovolo. Mamoa loko isan-karazany araka izay ilainao ary raha maro loko ny ranonao, dia ny tavoahangy PET voajanahary no tsara indrindra. Misy satroka plastika, kapila vita amin'ny alimina ary paompy fanosotra. Azo oharina amin'ny tontolo iainana sy azo antoka mangarahara afaka manome alim-bokatra plastika sakafo amin'ny PET Amin'ny alàlan'ny Crystal Spiral Lid. Sakafo grade PET. Tsy misy poizina, tsy misy fofona, azo antoka, namana ara-tontolo iainana ary voaisy tombo-kase tsara, hihazonana ny sakafo vaovao. Azo atao pirinty amin'ny siny, fanontana amin'ny lamba landy. Mazava sy miloko.
Tavoahangy PET 100 damaskeen mangarahara misy famaranana vozona 18-410
Tavoahangy plastika 100ml. Raha miloko ny ranonao dia ny tavoahangy PET voajanahary no tsara indrindra. Misy satroka plastika, kapaoty, paompy ary paompy. Ny tavoahangy plastika feno sakafo ara-tontolo iainana, azo antoka ary mangarahara miaraka amin'ny tampon'ny flip dia azo ampiasaina ho tavoahangy mamintina. Ny PET ambaratonga sakafo dia tsy misy poizina, tsy misy tsirony, azo antoka, sariaka amin'ny tontolo iainana, ary manana tombo-kase tsara. Serivisy OEM: Fanontana lamba amin'ny Logo, labozia taratasy, labozia plastika, famonosana fonosana. Mora ampiasaina sy madio. Mora ny mitondra ny vokatra fikarakaranao hoditra, miaraka amina endrika kely sy mora entina, azonao atao ny mametraka azy ireo na aiza na aiza, mitahiry toerana ary mety amin'ny dia an-drivotra.
6.8oz 200ml tavoahangy fisaka PET madio misy tendany 24-410
Tavoahangy plastika 6.8oz Mamokatra loko isan-karazany arakaraka ny filanao. Raha miloko ny ranonao dia ny tavoahangin'ny PET natoraly no tsara indrindra. Misy satroka plastika, satroka atsipy, spray ary paompy. Ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fiarovana ny mangarahara PET tavoahangy plastika sakafo misy flip cap dia azo ampiasaina ho tavoahangy mamintina. Pet-grade Sakafo PET dia tsy misy poizina, tsy misy tsirony, azo antoka, sariaka amin'ny tontolo iainana ary fananana famehezana tsara. Serivisy OEM: fanontana lamba vita amin'ny landy, marika vita amin'ny taratasy, labozia plastika, famonosana. Mora ampiasaina sy hadio. Mora ny mitondra ny vokatrao amin'ny hoditrao am-pandehanana, miaraka amina endriny mifangaro sy azo entina, azonao atao ny mametraka azy ireo na aiza na aiza, mamonjy toerana sy mora entina amin'ny dia rivotra.
6.8 Oz Oz tavoahangy boribory PET misy vozony 60-410
200ml PET fanafody mainty plastika tavoahangy plastika Paps Capsules tavoahangy. Famolavolana fonony mora entina 。Tanjana maivana, fanoherana ny fiantraikany, porofo mivaingana tsara, fananana simika azo antoka; mety amin'ny famonosana fanafody marobe sy mora alefa sy hitahiry. Fitaovana mahasalama sy sariaka amin'ny tontolo iainana. tsy misy poizina ary tsy misy tsirony, mora milalao an'ity tavoahangy kely azo entina ity. Serivisy OEM: fanontana pirinty vita amin'ny landy, marika taratasy, plastika marika, mihena ny fonosana. Tavoahangy fitsaboana plastika fotsy boribory banga. Mazava ny vatan'ny tavoahangy, gloss tsara, fampisehoana famehezana tsara .Aluminum foil gasket, gasket sensitive pressure ary gasket foam. sehatry ny plplication: fanafody, vokatra fitsaboana, sakafo sns.
Tavoahangy famafazana boribory PET 5 oz misy famaranana vozona 24-410
Tavoahangy 5oz 150ml manaparitaka fitaovana PET, izay mateza amin'ny fampiasana maharitra. Ny famolavolana tavoahangy plastika tsy manam-paharoa dia mahatonga azy io ho manokana sy tsara tarehy kokoa. Ny noosony voaisy tombo-kase dia hamafa ny zavona tsara, mety tsara hiasa. Mety amin'ny fampiasana any an-trano sy any amin'ny salon fanaovana haingon-doha matihanina. Serivisy OEM: fanontam-pirinty lamba vita amin'ny landy, marika taratasy, labozia plastika, famonosana. Tavoahangy fanafody plastika fotsy tsy misy endrika boribory. Ny vatan'ny tavoahangy dia mazava, gloss tsara, fampisehoana famehezana tsara. Sehatra fametahana: tavoahangy fanamoriana volo, tavoahangy poakaty, tavoahangy zavona, refesina fitaovana volo, fitaovana fikarakarana rano sprayer sns.
Tavoahangy boribory PET 2,7 Oz Oz misy tendany 40-410
100ml PET green pharmaceutika plastika Vitaminina Pill Capsules tavoahangy. Lanja maivana, fanoherana ny fiantraikany, porofo mivaingana tsara, fananana simika marin-toerana; mety amin'ny famonosana fanafody ranoka sy matevina marobe ary mora alefa sy hitahiry. Fitaovana mahasalama sy sariaka amin'ny tontolo iainana. tsy misy poizina sy tsy misy tsirony, mora milalao an'ity tavoahangy kely azo entina ity. Serivisy OEM: fanontana lamba vita amin'ny landy, fanoratana taratasy , Famaritana plastika, famonosana. Tavoahangy fanafody plastika fotsy tsy misy endrika boribory. Ny tavoahangy plastika mazava dia mazava, mazava tsara, tsara fampisehoana famehezana. sehatry ny plplication: fanafody, vokatra fitsaboana, sakafo sns tavoahangy pilina mahazatra
7oz （207ml） PET maitso fanafody tavoahangy plastika vitamina Pill Capsules tavoahangy. Lanja maivana, fanoherana ny fiantraikany, porofo mivaingana tsara, fananana simika azo antoka. Serivisy OEM: fanontana pirinty vita amin'ny lamba landy, marika taratasy, labozy plastika, famonosana. Tavoahangy fitsaboana plastika fotsy boribory banga. Mazava ny vatan'ny tavoahangy, gloss tsara, fampisehoana famehezana tsara .Aluminum foil gasket, gasket sensitive pressure ary gasket foam. ny tavoahangy fanafody sasany dia mahazaka -80ºC hatramin'ny 120ºC.Sterilization: atrikasa fanadiovana 100 000, ary ny masinina fanamafisam-peo EO dia miantoka ny famokarana tsy mandeha amin'ny laoniny.